23 သင်ကနယ်လှည့်မဖြစ်မီ Download လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 23 သင်ကနယ်လှည့်မဖြစ်မီ Download လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ
ငွေကြေး app ကိုကျနော်တို့မကြာသေးမီကအပေါ်ဘလော့ဂ်ရေးသားခဲ့သည် ရထားပေါ်တွင်လေးတွေနှင့်အတူစီးနင်း သငျတို့သဧည့်ခံသည်သင်၏သူငယ်များကိုစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အခြို့သောအကြံပေးချက်များကိုပေး၏. Reading စာအုပ်များ, UNO ကစားခြင်းနှင့်အော်ဒီယိုစာအုပ်များကိုနားထောင်ကျိန်းသေမည်သူမဆိုများအတွက်မဖြစ်မနေဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာကိုမထွက်ခွာမီမှာ download ဆွဲရန် apps များစွာရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကသင့်ကိုဖျော်ဖြေရုံတင်မကဘူးသင်ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည် သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် ပိုပြီးစနစ်တကျနဲ့ပျော်စရာ! App Store မှာကနေ Google Play ကိုမှ, ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးအချို့တက်ဝိုင်းင့် 23 သင်ကနယ်လှည့်မဖြစ်မီ Download လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ. သင်လိုအပ်အားလုံးသည်သင်၏နောက်ခရီးစဉ်မတိုင်မီစမတ်ဖုန်းများနှင့်တစ်ချိန်ချိန်ဖြစ်ပါသည်.
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် တစ်ဦးကရထား Save, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
1. အရပ် Stay များအတွက်: Airbnb
သင်သွားရောက်လည်ပတ်သို့မဟုတ်မနေမွို့၌ဥပဒေရေးရာင်ရှိမရှိ, Airbnb အိမ်ထောင်စုနာမတော်သည်. ဒါဟာကျိန်းသေသငျသညျနယ်လှည့်မတိုင်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ် Apps ကပတစျဦးဖွစျသညျ. ဝေးဒီ app ကမ်းလှမ်းမှု စျေးနှုန်းချိုသာစျေးနှုန်းများ, အသုံးပြုသူများကဒေသခံတစ်ဦးနှင့်အတူနေရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်နှင့်ပိုပြီးစစ်မှန်အတွေ့အကြုံကို, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏နေအိမ်များတွင်. ဒီ app ကိုလည်းကမ်းလှမ်း အင်္ဂါရပ်ကိုခေါ်ခရီးများထွက်ခြင်း, သင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းကနေရှေးခယျြဖို့အတွေ့အကြုံများကမ်းလှမ်းရာ. ကျနော်တို့ကတဦးတည်းသွားလာရင်းအတွက်သင်လိုအပ်သမျှကိုကမ်းလှမ်းတိုင်အောင်ရှည်လျားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေသေချာ, ယခုမူကားများအတွက်, သူတို့ပူဇော်ရွေးချယ်စရာများကဒေါင်းလုပ်ကျိန်းသေတန်ဖိုးရှိများမှာ.
ရထားနဲ့ Lille မှရထား
2. နောက်ဆုံး Minute Hotel Room သို့ခရီးမသွားခင်သင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် Apps: ဟိုတယ်ယနေ့ည
အဖြစ်မှန်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင့်ရဲ့ Airbnb မှတဆင့်လဲကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်. အဲဒီ app ကို၏တစ်ခုတည်းသောကျဘက်ကိုဖြစ်ပါသည်. ဒါပေမယ့်စိတ်ပူစရာကိုမ, သင်ဆဲတဲ့အစီအစဉ် B ကရှိနိုင်ပါသည်. ဟိုတယ်ယနေ့ညနောက်ဆုံးမိနစ်အပေးအယူအပေါ်ဆိုရမှာပါတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်. အချည်းနှီးသောအခန်းများအပေါ်အထူးလျှော့စျေးကမ်းလှမ်းရန်ဟိုတယ်များနှင့်အတူအဆိုပါကုမ္ပဏီမိတ်ဖက်, သငျတို့သအောက်မှာတစာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် 10 စက္ကန့်. သင်တို့သည်လည်းရ 24/7 ဟိုတယ်ယနေ့ညအသင်းထံမှဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု, အမှုတစ်ခုခုကော်လံကလွဲနေတယ်ဝင်.
ရထားဖြင့် Linzburg သို့ Linz
3. ကြိုတင်ဘွတ်ကင်စျေးပေါသောဟိုတယ်များအတွက်ခရီးမထွက်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ: Hopper
Hopper သင်ဘွတ်ကင်များအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများတွေ့မယ့်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များနှင့်ဟိုတယ် App ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာစျေးနှုန်းများကိုခြေရာခံများနှင့်အရံခန်းများနှင့်စာအုပ်ပျံသန်းမှုဖို့စျေးအသက်သာဆုံးအကြိမ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ဒေတာကိုလေ့လာဆန်းစစ်. ယင်း၏က်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ, ကဂုဏ်ယူ 95% ကြိုတင်မဲအတွက်တစ်နှစ်မှသံသယထအပေါ်ခန့်မှန်းချက်များတွင်အောင်မြင်မှုရမှုနှုန်း. မဆိုးပါဘူး!
4. စျေးနှုန်းမနှိုင်းယှဉ်မီသင် download လုပ်ရမည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ: ယပ်လှေ
ကျနော်တို့နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်ခရီးသွားအစီအစဉ်များကိုဒီမှာအနည်းငယ် apps များပြီးသားရရှိပါသည်နေစဉ်, ယပ်လှေအားလုံးသင့်ရဲ့ခရီးသွားလိုအပ်ချက်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များအကြားစျေးနှုန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်အထောက်အကူပြုတစ်ခု All-In-One App ဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်ဟိုတယ်များပါဝင်သည်, လေယာဉ်ခရီးစဉ်, ကားအငှားလုပ်ငန်း, ပင်ခရီးသွား packages များ. Take advantage of its massive amounts of comparisons to book all the travel you’ll need in one spot.
မြူးနစ်မှ Salzburg သို့ရထားဖြင့်
ရထားဖြင့် Salzburg မှဗီယင်နာ
ရထားဖြင့် Salzburg သို့ Graz
5. သင်ရထားလက်မှတ်များမသွားမှီသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အပလီကေးရှင်းများ: တစ်ဦးကရထား Save
သငျသညျဥရောပတစ်လျှောက်လုံးခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏လမ်းအောင်ပါလိမ့်မယ်ကောင်းတစ်ဦးအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ် ရထားနဲ့. ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဥရောပ၌ရွေးချယ်မှုများဟာသူတို့ရဲ့ Cross-တိုင်းပြည်လင့်များကြောင့်ထင်ရှားသည်, နှင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုအစာရှောင်နေစဉ်, ရထားကပိုအဆင်ပြေများမှာ, ပိုပြီးမကြာခဏ, နှင့်ဝန်ဆောင်မှုအများအပြားပိုပြီးလမ်းကြောင်းများ. သငျသညျရထားလက်မှတ်တွေဘို့လိုအပ်ကြောင်းရောက်နေသောဖြစ်ရပ်အတွက်, ဒေါင်းလုပ်အတွက် တစ်ဦးကရထား Save ဝယ်ယူမှုစျေးပေါပြီးလွယ်ကူစေရန် app ကို.
6. The Go တွင်ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ခရီးမထွက်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အက်ပလီကေးရှင်းများ: Netflix
ယခုအားဖြင့်ငါတို့သည်အားလုံး Netflix ဟာဘာလဲဆိုတာသိ. သငျသညျမယျဆိုရငျ, တစ်ဖွဲ့လုံးကမ္ဘာသစ်မှကြိုဆိုပါတယ်! တစ်ဦးအခမဲ့အစမ်း sign up ပြုလုပ်ပါ, အားလုံးအကြိုက်ဆုံးပြပွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကို download လုပ်ပါနှင့်သင်ရထားပေါ်မှာဆိုရင်နေချိန်မှာသူတို့ကိုစောင့်ကြည့်, Wi-Fi ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲ! ကွဲပြားခြားနားသောပွဲများကိုသင်သွားရောက်လည်ပတ်နေသောအရာကိုတိုင်းပြည်သည်နှင့်အညီရရှိနိုင်ကြသည်ကိုသတိပြုပါ, ဒါကြောင့်သင်လုံးဝတဦးတည်းစွဲနေလျှင်, သင်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မတိုင်မီတတ်နိုင်သမျှအများအပြားဖြစ်စဉ်များအဖြစ်ဒေါင်းလုပ်ရန်သေချာစေပါ!
7. သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူသင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ခွဲပစ်ရန်ရန်: Splittr
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူခရီးထွက်? ကြီးမားသော! သငျသညျကိုမှန်ကန်စွာသင့်ရဲ့ခရီးသွားရန်ပုံငွေများခွဲမရကြပါလျှင်အမှုအရာအဆင်မပြေရဖို့များအတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ပဋိပက္ခရှောင်ကြဉ်ပါနှင့်မိတ်ဆွေများအကြားအလွယ်တကူအုပ်စုခွဲကုန်ကျစရိတ်ရန်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းကိုသုံးပါ. သငျသညျအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသည်ဆိုလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့ခရီးသွားလာမတိုင်မီဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့် apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. Splittr ခရီးသွားလာနေသောလူများအတွက်အထူးဖြစ်ပါသည်. သွားလာရင်းကုန်ကျစရိတ် Enter, အဘယ်အရာကိုများနှင့် app ကိုကြွင်းသောအရာကိုပြုလိမ့်မည်ပေးဆောင်တဲ့သူအပါအဝင်.
ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးနှင့်အတူလာရောက်လည်ပတ်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများ? ပြဿနာမရှိပါဘူး. အားလုံးငွေကြေးထောက်ပံ့ထားကြသည်နှင့်သင်ငွေကြေးပြောင်းလဲခြင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်လုပ်ဖို့မလိုဘဲပိုက်ဆံရောမွှေလို့ရပါတယ်.
8. သိမှတ်ဖွယ်ဖို့ဘယ်လိုအများကြီးလေ့လာပါရန်: ကမ္ဘာလုံးသိကောင်းစရာများ
ဒီ app ကို iOS ပေါ်မှာသာရရှိနိုင်ပေမယ့်, GlobeTips နိုင်ငံတကာက Tipping အကြောင်းကိုရောထွေးသူတို့အားကူညီမယ့်အံ့သြစရာကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်. ဤသည်အထူးသဖြင့်မှခရီးသွားများအတွက်အထူးသဖြင့်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်ပါတယ် Tipping-based စီးပွားရေး အဘယ်သူသည်ပြည်ပမှာနေစဉ်ရုန်းကန်. သငျသညျပြင်သစ်သို့မဟုတ်စပိန်အတွက်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, take advantage of GlobeTips to learn how much money to tip all professions.
Nuremberg သို့ Stuttgart သို့ရထားဖြင့်ပို့သည်
မြူးနစ်ကို Stuttgart သို့ရထားဖြင့်ပို့သည်
ရထားဖြင့် Frankfurt သို့ Stuttgart သို့သွားမည်
Heidelberg မှ Stuttgart သို့ရထားဖြင့်သွားသည်
9. Chilling ထဲကမှ: တည်ငြိမ်သော
သင်တစ်ဦးနှောက်အာရုံကြောခရီးသွားနေပါလျှင်, သင်ခရီးမထွက်မီသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အက်ပ်များထဲမှတစ်ခုသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သည်, ၎င်းသည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်မည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤသည်နေရာလေးကိုခရီးသွား tool ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအဘို့ကွဲပြားခြားနားသောတရားအားထုတ်ခြင်း၏ဝန်ရှိပါတယ်, Self-soothing, အသက်ရှူခြင်းနှင့်ပိုပြီး. ၎င်းသည်သင်အနားယူကူညီရန်အသံ soothing ကမ်းလှမ်းမှု. တစ်ထုတ်အလေးပေးခရီးသွားအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်, အေးဆေးတည်ငြိမ်ကြှနျုပျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်, ကောင်းစွာ, calm on the road.
ရထားနဲ့ Strasbourg ကိုပဲရစ်
လူဇင်ဘတ်သည် Strasbourg သို့ရထားဖြင့်သွားသည်
ရထားဖြင့် Strasbourg သို့နန်စီ
ရထားဖြင့် Strasbourg သို့ Dijon
10. သင့်ရဲ့အမှတ်တရများကိုသိမ်းဆည်းထားပါရန်: တိုက်ရိုက် Trekker
တစ်ဂျာနယ်ထဲမှာရေးသားခြင်းဟောင်းကျောင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်. ဒါပေမယ့်စက္ကူနည်းလမ်းများအပေါ်ဘာမှသင်ကဆုံးရှုံးများ၏အန္တရာယ်ကို run, သငျသညျမျိုးစုံနိုင်ငံများတွင်လာရောက်လည်ပတ်နေတဲ့အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ခရီးမသွားခင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှာ livetrekker.com ဖြစ်သည်. ဂျာနယ်သည်သင်၏ခရီးသွားမှတ်တမ်းသင်တစ်ဦးအပြန်အလှန်မြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ခရီးစဉ်အပေါ်ပြန်ကြည့်နိုင်အောင်. သငျသညျကိုသှားအဖြစ်ဒီ app ကိုသင်ခြေရာခံ, သငျသညျယူအတိအကျလမ်းကြောင်းအပေါ်မြေပုံနှင့်အတူအနီရောင်လိုင်း marking; app ကိုလည်းသင့်ရဲ့အမြန်နှုန်းနှင့်အမြင့်စောင့်ကြည့်, စွန့်စားမှုခရီးသွားများအတွက်ကကြီးမြတ်အောင်. ပုံရိပ်တွေ Add, ဗီဒီယိုက, လမ်းတစ်လျှောက်အသံနှင့်စာသား, သင်ဝေမျှနိုင်ပါတယ်တဲ့မာလ်တီမီဒီယာခရီးသွားဒိုင်ယာရီကို! အခမဲ့, iOS နဲ့ Android, livetrekker.com
ရထားဖြင့် Milan သို့ Verona
11. သင်ကိုယ်တိုင်သိမ်းဆည်းထားပါမှဖှဲ့စညျး: PackPoint
ဒါဟာဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးစွန့်စားမှုပေါ်သွား၏ရုံစိတ်လှုပ်ရှားင်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ခရီးစဉ်မတိုင်မီပြုပါသို့မဟုတ်ထုပ်ပိုးရန်မေ့လျော့ရာတစ်ခုခုကိုအစဉ်အမြဲရှိမယ့်. ကံကောင်းတာကနည်းပညာနောက်တဖန်နေ့ကိုကယ်ဖို့ကဒီမှာ. PackPoint Download! ဒါဟာသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်၏ရက်စွဲများနှင့်တည်နေရာများအတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်မှာကြည့်. ဒါဟာအစသင်သည်သင်၏ခရီးစဉ်ကာလအတွင်းတွင်ပါဝင်စေခြင်းငှါလှုပ်ရှားမှုများကို select ရန်သင့်အားမေးပါလိမ့်မယ်, ထိုကဲ့သို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစည်းအဝေးတစ်ခုအဖြစ်, တစ်ရေကူးကန်မှာရေကူး, ဒါမှမဟုတ်ဖန်စီညစာ. ထိုအခါကထိုအလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်အခြေခံပြီးသင်ဆောင်ကြဉ်းသင့်ပါတယ်ပစ္စည်းများကိုတစ်ဦးထုပ်ပိုးစာရင်းဖွင့်ပူဇော်ပါလိမ့်မယ်. Snazzy, မှန်သော? သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတွေ့ပြီအဘယျသို့မျှဝေနိုင်ပါသည်, ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ပိုမိုလွယ်ကူအောင်, လွန်း! ဒါကြောင့်သင်ခရီးသွားလာမတိုင်မီဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့လိုအပ် Apps ကပ၏ဤအရေးကြီးသောအစွန်အဖျားသတိရ.
12. လှုပ်ရှားမှုများတွင်အကြံဉာဏ်များအတွက်: TripAdvisor
TripAdvisor သင်ရုံအကြောင်းကိုဘာမှ၏ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသန်းပေါင်းများစွာပေးနိုငျသောစူပါ App ဖြစ်ပါတယ်, မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလမ်းအတွက်! အဲဒီအကြောင်းအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ထင်မြင်ချက်များ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်ဓာတ်ပုံများအစစ်အမှန်ကလူထံမှများမှာ, ဒါကြောင့်သင်ကတရားဝင်ဖွင့်ကိုသိ! တို့ကအနီးကပ်ကောင်းစွာပြန်လည်သုံးသပ်သောအရပ်တို့ကိုမတွေ့ရှိရန် TripAdvisor ရဲ့အနီးငါ့ကို function ကိုထွက်ကြိုးစားပါ, ဒါပေမယ့်ပလီကေးရှင်းကိုကမ်းလှမ်းဖို့ရှိပါတယ်ရဲ့အကောင်းဆုံး feature ကိုကထောကျပံ့နိုင်ငံတွေ၏နံပါတ်ဖြစ်ပါသည် - ကဖွင့်အကြောင်းကိုနေရာတိုင်းင်, သည်ခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်သောလမ်းညွှန်အောင်. သင်တို့သည်လည်း app ကိုဖွင့်ဖိုရမ်များအတွက်တိကျတဲ့ခရီးသွားမေးခွန်းများမေးသို့မဟုတ်အကူအညီနဲ့မှအလားတူလမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်များထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.
ရထားဖြင့် Frankfurt သို့ Cologne
မြူးနစ်ကို Frankfurt သို့ရထားဖြင့်
ရထားဖြင့် Frankfurt သို့ Hanover
ရထားဖြင့် Hamburg သို့ Frankfurt သို့
13. ကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးကဒေသခံအားဆင့်ဆိုရမည်မှာမှ Learn to: Duolingo
Over-ပုံကြီးချဲ့လက်အမူအရာနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းစကားပြောပျော်စရာပုံရသည်ဖြစ်သော်လည်း, တစ်ခါတစ်ရံအနည်းငယ်ပင်ပန်းတယ်ရနိုင်. Duolingo Enter. သင်ဒေသခံများနှင့်အတူအတွက်ရတဲ့အကြောင်းကိုအလေးအနက်ဆိုရင်, ဒီ app ကို download လုပ်ပါ!
ဒါဟာအစပြုသူ-Level သင်တန်းများကမ်းလှမ်း, ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများအပေါ်ကိုတက်တိုက်မှရှာဖွေနေသူတို့အားအဘို့ကြီးစွာသော tool ကိုဖွင့်. သင်တို့သည်လည်းရှေးခယျြထားသောဘာသာစကားများ bot တွေဟာနှင့်အတူ chat လို့ရပါတယ်. သင်ပြည်ပမှာအများဆုံးအသုံးပြုဖွယ်ရှိနေသည့်စာပိုဒ်တိုများသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါဒီအထူးသဖြင့်အထောကျအကူဖွစျစနေို.
14. သူတို့ဟာဟုဖွင့်အဘယျသို့အထဲက Find မှ: Google က App ကို Translate
ကျနော်တို့ပြီးသား Duolingo အကြံပြုပါတယ်နေစဉ်, သင်တစ်ဦးအချိန်အကြပ်အတည်းနှင့် Real-time အတွက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုလိုသောရောက်နေပါလျှင်, Google Translate အသုံးပြုမှုဖို့ App ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာစကားသံကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်သင်သည်အစဉ်အကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခြေခံအားဖြင့်တိုင်းနိုင်ငံခြားဘာသာစကား features, ပတ်ပတ်လည်ကိုအကောင်းဆုံးဘာသာပြန်ချက် apps များ၏ဤတစျဦးအောင်. သင်တစ်ဦးမှာ Android သို့မဟုတ် iPhone ကိုရရှိပါသည်ရှိမရှိ amiable ဒါဟာင်, ပင်အသုံးဝင်အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်ပါသည်.
ရထားဖြင့် Hanover မှ Dresden သို့
ရထားဖြင့် Dotsden မှ Potsdam
Nuremberg မှ Dresden သို့ရထားဖြင့်သွားသည်
15. နယူးသူငယ်ချင်းများ Make မှ: Meetup
သငျသညျခရီးသွားလာနေစဉ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်လုပ် likes သူကိုခရီးသွားများ၏ကြင်နာတယ်ဆိုရင်, အဘယ်သူမျှမဝေးတဲ့ကြည့်ရှု. Meetup အားလုံးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသင်တို့ကဲ့သို့စိတ်ရှေးရှေးတွေ့ဆုံရန်ကူညီပေးနေထံအပ်နှံထားတဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအတိုး-based အုပ်စုများဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်, နှင့်ဒေသခံများနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောဘားတွားနှင့်အစားအစာများအဖြစ်ဖြစ်ရပ်များဖန်တီး. ဒီ app ကိုတောင်ဆိတ်သငယ်-ဖော်ရွေလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မိသားစုများများအတွက် setting ကိုရှိပါတယ်. nice!
ရထားဖြင့် Prague သို့ဗီယင်နာ
16. သင်ကရောက်ရှိတဲ့အခါမှာခန့် Get မှ: Uber
ခရီးသွားလာနေစဉ်ကျွန်တော်အမြဲရထားအစားကားတစ်စီးကို အသုံးပြု. အကြံပြုပါ့မယ်သော်လည်း, သင်ကိုယ်တိုင်ညအချိန်တွင်နှောင်းပိုင်းတွင်ရောက်ရှိလာသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုမရှိဘဲတစ်နေရာရာကိုဦးတည်တှေ့လြှငျသငျသညျ Uber သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. မရနိုင်ငံတိုင်းကတော့ Uber သို့မဟုတ်ယင်း၏အမေရိကန်ပြိုင်ဘက် Lyft ရှိပါတယ်နေစဉ်, နီးပါးတိုင်းတိုင်းပြည်အချို့ကြင်နာတဲ့တက္ကစီ app ကိုရှိပါတယ်. သငျသညျကာဇက်စတန်သို့မဟုတ်ပြင်သစ်တွင်နေပဲဖြစ်ဖြစ်, find your local taxi app and make sure to download it before hopping on the train.
17. လမ်းတွေအကွေ့အကောက်များသောလမ်းကြောင်းမှသူများသည်: Google Maps ကို App ကို
သငျသညျပေါ်ကဆင်းခွင့်ပေးလိုက်တယ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ကအကောင်းဆုံး baguette ရှာနေလမ်းများလှည့်လည်တွေ့ရှိရင့်ပြီးတာနဲ့, သင်တို့ပတ်လည်ရရန် Google Maps လိုပါလိမ့်မယ်. အဘယ်ကြောင့်? Google Maps ကိုကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအညွှန်း apps များထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကြောင့်,. လမ်းလျှောက်လမ်းညွန် မှစ. မီးရထားအချိန်ဇယားမှ, Google ကသငျသညျဖုံးအုပျထားပါတယ်. ပိုတောင်ကောင်းသွားပြီ, သငျသညျအသုံးပြုမှုအတွက်မြေပုံဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်အော့ဖ်လိုင်း, which means in areas with spotty WiFi you can still find that hidden bistro down an alley.
ဒေါင်းလုပ်မြေပုံမှ, ရိုးရှင်းစွာသင်အသုံးပြုမှုချင်ပါတယ်မြေပုံရန်သင့်စမတ်ဖုန်းများနှင့်လမ်းကြောင်းရှာရန်အပေါ်ကို Google Maps မှဦး. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့တပ်မက်လိုချင်သောအနေရာများတွင်အပေါ်ဗဟိုပြုရဲ့ပြီးတာနဲ့, ရိုက် “OK ကိုမြေပုံ” ရှာဖွေရေးဘားသို့. Google ကမည်သည့်အချိန်ကသင်အသုံးပြုဘို့သင့်ဖုန်းကိုရန်အော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်စတင်မည်. ဒါပဲ!
La Rochelle မှ Nantes သို့ရထားဖြင့်ထွက်ခွာမည်
Toulouse မှ La Rochelle သို့ရထားဖြင့်သွားပါ
ဘရာဇီးမှ La Rochelle သို့ရထားဖြင့်သွားသည်
ရထားဖြင့်ပဲရစ်မှ La Rochelle သို့
18. သင်၏ခရီးကိုခြေရာခံရန်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်အပလီကေးရှင်းများ: TripIt
TripIt တစ်နေရာတည်းတွင်အားလုံးသင့်အချက်အလက်များကိုစုစည်းပြီးကူညီပေးသည်တဲ့ခရီးသွားခြေရာခံ App ဖြစ်ပါတယ်. လေယာဉ်ခရီးစဉ်စာအုပ်ကနေဟိုတယ်ကိုကြိုတင်မှာယူမှုများမှ, TripIt လွယ်ကူသော-to-ကိုဖတ်ရှုခရီးစဉ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်စောင့်ရှောက်ကြောင်းသို့အရာအားလုံးစုစည်း. app ကိုတိုက်ရိုက်သင့်အကောင့်လင့်ထားသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့အတည်ပြုချက်အီးမေးလ် forward, နှင့် TripIt ကြွင်းသောအရာကိုပြုလိမ့်မည်. Desktop ပေါ်မှာရရှိနိုင်, အန်းဒရွိုက်သို့မဟုတ် Apple က iPhone အတွက်, you’ll be able to use it anywhere in the world.
ရထားဖြင့် La Spezia သို့ဗင်းနစ်သို့သွားမည်
19. သင့်ရဲ့ငွေကြေးလဲလှယ်ရေးနှုန်းကိုသိရန်: ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအားဖြင့်ငွေကြေး App ကို
ဒီတစ်ခုအနည်းငယ်ပိုနယ်ပယ်ဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, ငါဒေတာသို့မဟုတ် Wi-Fi မရှိဘဲလမ်းမပေါ်တွင်ဖူးနှင့်ငွေလဲနှုန်းသိရန်အပူတပြင်းပါပြီအကြိမ်များများရှိပါတယ်. ကရိပ်ရတဲ့တက္ကစီယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်သင်အတွက်ငွေသားပေးချေတောင်းဆိုနေပြီတဲ့ခရီးစဉ်ရဲ့ရှိမရှိ, ငွေကြေး converter နဲ့တူလုပျဆောငျဖို့လက်ပေါ်မှာ app တစ်ခုရှိခြင်းတစ် godsend နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးကရထား Save ငွေကြေး app ကို အကျင့်ကိုကျင့်ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းသင်ကလိုအပ်သည့်အခါဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲရရှိနိုင်မယ့်.
ရထားဖြင့် Interlaken မှဘေဆယ်
ရထားဖြင့် Interlaken မှ Bern
Lucerne မှရထားဖြင့် Interlaken
ရထားဖြင့် Interlaken မှဇူးရစ်
20. အရာအားလုံးများအတွက်: WhatsApp ကို
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဒီ app ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်, နားလည်ပါတယ်. မြောက်အမေရိကအကြီးအကျယ်ဒေတာ-based မိုဘိုင်း app လွဲချော်ထားပါတယ်နေစဉ်, WhatsApp ကိုမက်ဆေ့ခ်ျပို့ဘို့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အသုံးပြုသည်, ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများနှင့်အသံဖြင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု. ၎င်း၏လူကြိုက်များအများဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရေခြားမြေခြားအပြင်သို့မဟုတ်ပင်တစ်ဦးစံဖုန်းနံပါတ်များ၏အစားတစ်ဦး WhatsApp ကိုနံပါတ်တစ်ခုနှင့်အတူလည်ပတ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်. Trust us when we say you’ll need to download WhatsApp.
Florence to Arezzo ရထားနဲ့
ရထားဖြင့် Perugia သို့ Arezzo
ရထားဖြင့် Arologo သို့ Bologna
21. သင်၏ခရီးစဉ်များမထွက်ခွာမီသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများ: LoungeBuddy
ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပျံသန်းဖို့အကောင်းဆုံးစိတ်ကူးမယ့်နေစဉ်, အထူးသဖြင့်ဥရောပအတွင်း, ရထားမသွားနိုင်ရှိရာတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ခေါင်းကိုတစ်ဦးလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုဖမ်းရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျလေဆိပ်များတွင်တက်အဆုံးသတ်ဘူးဆိုရင်, ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာသာနှင့် download LoungeBuddy ပြုပါ, သငျသညျလေဆိပ်နားနေခန်းမှလျှော့ access ကိုဝယ်ယူရန်ခွင့်ပြုမယ့်နေရာလေးကိုခရီးသွား App ကို. ဒါကသူတို့အရှည်လျား layovers အပေါ်အထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်ပါသည်, လေဆိပ်နားနေခန်းအခမဲ့အစားအစာနှင့်အချိုရည်ပူဇော်အဖြစ်. ပို. အရေးကြီးသည်, သူတို့သင်၏နောက် layover ပိုပြီးပျော်စရာဖြစ်လိမ့်မည်ဒါကြောင့်မကြာခဏလေဆိပ်တာမီနယ်များတွင်တွေ့ရသော Hustle နှင့်ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေခိုလှုံရာအဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်.
ရထားဖြင့် Frankfurt မှ Cologne သို့
ရထားဖြင့် Dresden မှ Cologne သို့
ရထားဖြင့် Cologne မှ Aachen
22. ဥရောပမှာတော့မြောက်အမေရိကန်များအတွက်: မက်ထရစ်ကူးပြောင်းခြင်း App ကို
အခြားသူများကိုမြောက်ကိုရီးယားအမေရိကန်တွေပြုံးရယ်ခြင်းနှင့်များ၏ဧကရာဇ်စနစ်ကသူတို့ပိုင်ထိုက်သောလိုက်နာမှုလိုနေချိန်မှာ တိုင်းတာခြင်း, သူတို့ရေခြားမြေခြားခေါင်းသောအခါစိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်အလေးအနက်အကြောင်းမရှိဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. ကိုးဆယ်ကီလိုမီတာတစ်နာရီဘယ်လောက်မြန်များမှာ? ခေါက်ဆွဲတစ်ကီလိုဂရမ်ဘယ်လောက်အလေးချိန်ပါဘူး? သင်သည်သင်၏ခရီးသွားသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ apps များအပိုင်းမှာမရရှိနိုင်သည့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားနှင့်ညီမျှ app ကို အသုံးပြု. စတင်အလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ဤမေးခွန်းများကိုသင့်ဖုန်းဟာ Metric ကူးပြောင်းခြင်း app ကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ရီစရာရှာဖွေနေခြင်းမရှိဘဲဖြေကြားဖူး ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဘလော့.
ရထားဖြင့်ဘာလင်သို့ Rothenburg Ob Der Tauber သို့
Stuttgart မှ Rothenburg Ob Der Tauber ကိုရထားနဲ့
မီးရထားဖြင့်မြူးနစ်မှ Rothenburg Ob Der Tauber သို့
ရထားဖြင့် Frankfurt မှ Rothenburg Ob Der Tauber
23. အမေရိကန် Enter မှ: မိုဘိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ် App ကို
ဤစာရင်းတွင်အပေါ်သာအစိုးရ၏တရားဝင် App ကို, မိုဘိုင်းနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ခရီးသွားများအတွက်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူအမေရိကန်ဝင်ကူညီပေးဖို့အမေရိကန်အကောက်ခွန်နှင့်နယ်စပ်ရေးရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကကမ်းလှမ်းနေသည်. သငျသညျအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ရောက်ရှိရှေ့မှာ Download နှင့်သင့်ဆဲလ်ဖုန်းအပေါ်သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်. ထိုအခါ, သငျသညျကိုဆင်းမထိတစ်ကြိမ်သင့်ရဲ့ပုံစံကိုတင်ပြရန်နှင့်အမေရိကန်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး kiosk များအတွက်ကြီးမားသောလိုင်း skip. ဒါဟာအသုံးပြုမှုကိုအခမဲ့လွယ်ကူမယ့်!
Leipzig မှ Nuremberg သို့ရထားဖြင့်
ရထားဖြင့် Hanover မှ Nuremberg သို့
ရထားဖြင့် Hamburg မှ Nuremberg သို့
ဒါကခရီးမသွားခင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမည့်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများစာရင်း, ဒါဟာရှည်လျားသောရထားခရီးစဉ်သို့မဟုတ်ပဲဒေသခံတစ် ဦး စီးနင်းအပေါ်ရှိမရှိ. သင်သည်သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်များနှင့်အတူမည်သည့်နောက်ထပ်အကူအညီလိုပါလျှင်, တစ်ဦးကရထား Save စျေးသိပ်မကြီးတဲ့နှုန်းထားများမှာကမ်းလှမ်းမှုရထားလက်မှတ်တွေ, သင်သည်သင်၏ destination သို့ရောက်ရှိသည့်အခါကပိုပျော်စရာလှုပ်ရှားမှုများအဘို့သင့်ဘတ်ဂျက်တက်လွတ်မြောက်စေဖို့!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/apps-download-traveling/- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
Apps longtrainjourneys ရထားခရီးသွား ရထားခရီးစဉ် ခရီးသွား traveltips